JOHANNESBURG(Wararka Maanta)-Taageerayaasha madaxweynihii hore ee Koofur Afrika Jacob Zuma ayaa isku gadaamay guriga mudanaha si ay isu hor istaagaan in masuulkaas xabsiga loo taxaabo.
Talaadadii aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaas ay mudane Zuma ka codsatay in uu hor yimaado iyada oo lagu soo eedeeyay arrimo musuqmaasuq. Maxkamadda ayaa markaa kaddib soo saartay waaran lagu soo xidhayo masuulkaas ugu dambeyn Axadda.
Maxkamadda ayaa sidoo kale oggolaatay in ay dhageysato mudane Zuma oo duray xukun ay soo saartay oo isaga ka dhan ah kaas oo dhigayay in muddo 15 bilood ah xabsiga la dhigo mudane Zuma.
Lama oga illaa iyo iminka sida dadweynahan gaashaanka u noqday mudane Zuma ay u baajin karaan in xabsiga loo taxaabo.
Zuma oo ku sugan hoygiisa ayaa shalay warbaahinta u sheegay in aanay jirin baahi khasbaysa in uu xabsiga galo sidoo kale waxa uu sheegay in xukun xabsi ah lagu riday iyada oo aan maxkamad la soo taagin taas oo uu ku tilmaamay in Koofur Afrika ay markale dib ugu sii simbiririxanayso maamulkii midab takoorka.
Wararka Maanta : Amar lagu soo rogay Shacabka dalka Uganda - Wararka Maanta: Somali News...